Trafikana fitaovam-piadiana: miaramila ny iray tamin’ireo tratra tetsy Ankadimbahoaka | NewsMada
Voasambotry ny polisy teo amin’ny fitobian-tsolika iray eny Ankadimbahoaka, omaly antoandro ny olona efatra (miaramila ny iray amin’izy ireo) nandeha fiara 4×4 marika Touareg, araka ny fantatra dia hoe voarohirohy ho mpanao trafikana bala.
Maty tampoka teo amin’ity fitobian-tsolika ity ny fiara nampiasain’izy ireo ka noraisim-potsiny teo ireto mpanao trafikana fitaovam-piadiana ireto. Efa narahin’ny polisy izy ireo ka izao noraisim-potsiny izao. Nentin’ny polisy avy hatrany ireto mpanao trafikana fitaovam-piadiana ireto. Tsy mbola nanome vaovao momba ny fisian’ireto mpanao trafikana fitaovam-piadiana ireto ny teo anivon’ny polisim-pirenena satria ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka izy ireo amin’izao fotoana izao, raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Angom-baovao tamina loharanom-baovao hafa kosa no nahafantarana ny momba ireto mpanao trafikana fitaovam-piadiana ireto. Nampiherika ny mason’ny olona izay nandalo teo akaikin’ity tobin-tsolika ity ny fisian’ireo polisy manao fanamiana sivily sy manao fanamiana polisy nanatanteraka ny fisamborana ireo olona tao anatin’ilay fiara 4×4 raitra dia raitra. Fantatra fa efa nisy loharanom-baovao hafa azon’ny polisy momba ny fisian’ireto mpanao trafikana fitaovam-piadiana ireto. Voalaza fa ilay miaramila ao anatin’ity tambajotrana mpanao trafikana fitaovam-piadiana ity no tompon’ilay fiara 4×4 marika Touareg.
Samy nifampanontany ny olona teny amin’ny manodidina ny toerana nisamborana azy efa-dahy ireto.
Mitohy ny ady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana…
Tsikaritra tato ho ato fa voasaringotra amina trafikana fitaovam-piadiana na firaisana tsikombakomba amin’ny asan-jiolahy ny mpitandro filaminana. Ny eo mbola tsy vita ny fanadihadiana, mipoitra sahady indray koa ny manaraka. Na eo aza anefa izany, misy hatrany kosa ny ezaka ataon’ireo tompon’andraikitra misahana ny fitandroana ny filaminana manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny andrasan’ny rehetra kosa raha tena misy marina ny mangarahara dia ny hamantaran’ny rehetra ny toby miaramila nivoahan’ireny fitaovam-piadiana tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy ireny. Efa maro ihany izay fitaovam-piadiana tratra izay, saingy tsy mbola fantatra kosa hatreto ny toby miaramila nivoahan’izy ireny. Ireny niaraha-nahita ireny ny fitaovam-piadiana latsaka tao amina tokantrano iray niharan’ny fanafihan-jiolahy teny Andoharanofotsy, andro vitsivitsy lasa izay. Mbola ifanilihana aza hoe iza marina ny tompon’ireny fitaovam-piadiana ireny?